PEACEFUL PA: November 2015
Blowing the Whistle on the Wolves By Larry Brown (Burmese)
“ထို့ကြောင့် သင်တို့သည် ကိုယ်ကို သတိနှင့် ကြည့်ရှုကြလော့။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအသွေးနှင့်ဝယ်တော်မူသော အသင်းတော်ကို လုပ်ကျွေးစေခြင်းငှါ၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် သင်တို့ကို အအုပ်အချုပ်ခန့်ထားတော်မူသော သိုးစုတစုလုံးကို သတိနှင့် ကြည့်ရှုကြလော့။ အကြောင်းမူကား ငါမရှိသည်နောက်၊ ကြမ်းတမ်းသော တောခွေးတို့သည် သိုးများကို မသနားဘဲ သင်တို့အထဲသို့ ဝင်မည်ကို၎င်း၊ တပည့်တော်များကို သွေးဆောင်ခြင်းငှါ၊ မှားသောစကားကို ပြောတတ်သောလူတို့သည် သင်တို့အထဲ၌ ပေါ်လာမည်ကို၎င်း ငါသိ၏။ ထို့ကြောင့် စောင့်ရှောက်၍ နေကြလော့။ ငါသည် သုံးနှစ်ပတ်လုံး နေ့ညမပြတ် လူအပေါင်းတို့ကို မျက်ရည်နှင့်တကွ ဆုံးမ၍နေကြာင်းကို အောက်မေ့ကြလော့။” --- တမန်၂၀း၂၈-၃၁ ။
တောခွေးတွေဟာ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ တောခွေးတွေကို ရှောင်ဖို့ဆိုရင် တောခွေးတွေကို မှတ်တတ်ဖို့ လိုတယ်။ “ညီအကိုတို့၊ သင်တို့ခံရပြီးသော ဆုံးမဩဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သော သင်းခွဲခြင်း၊ မှားယွင်းခြင်းအကြောင်းကို ပြုတတ်သော သူတို့ကို မှတ်၍ရှောင်ကြလော့ ဟု ငါသတိပေး၏။” ရောမ ၁၆း၁၇
“ဤစာ၌ ငါတို့ရေးထားသော ပညတ်စကားကို တစုံတယောက်သောသူသည် နားမထောင်ဘဲနေလျှင်၊ ထိုသူကို မှတ်ကြလော့။ ရှက်ကြောက်စေခြင်းငှါ အပေါင်းအဘော် မလုပ်ကြနှင့်။” ၂သက် ၃း၁၄ ။
တောခွေးတွေကို မှတ်ရတာခက်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့ နှုတ်ကတ်တော်ကို ကိုင်စွဲပြီး မြင်သာထင်သာရှိအောင်၊ မှတ်သားလို့ရအောင် ကျွန်တော်ကြိုးစားပြီး ဆွဲထုတ်ပြပါမယ်။
ဒီတရားဒေသနာဟာ တောခွေးသတ်တဲ့ ဒေသနာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တောခွေးစိတ်ရှိတဲ့ လူတယောက် အသင်းတော်မှာ ပါဝင်လာတာကို ဘယ်လိုမှ တားလို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တောခွေးလို့တော့ မှတ်ထားနိုင်တယ်။ တောခွေးဆိုတာ ဘယ်လိုလူလဲဆိုတာ အားလုံးသိအောင် လူရှေ့ ဆွဲထုတ်ပြနိုင်ရင်တော့ ပြဿနာတွေ သိပ်ရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တောခွေးတွေဟာ အရေခြုံ ဟန်ဆောင်တတ်တယ်။ ပုန်းနေတတ်တယ်။ တောခွေးတွေဟာ ပုံပြင်ထဲက တောခွေးလိုပါပဲ။ ပုံပြင်ထဲမှာ မိန်းကလေးက သစ်ပင် ခပ်ငယ်ငယ်ရဲ့ နောက်မှာကွယ်နေတယ်။ အဖွားအိမ်သွားမယ့် လမ်းမှာ တောခွေးတကောင်ရှိတာကို သိထားတယ်။ မသွားရဲတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် တောခွေးက ဟန်ဆောင်ရုပ်ပြောင်းထားတယ်။
အဲဒီတော့ ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့လည်း မြင်သာထင်သာရှိအောင် တောခွေးတွေကို ရှေ့ဆွဲထုတ်လိုက်ကြစို့။
ကျမ်းစာက တောခွေးသုံးမျိုးအကြောင်း ပြောထားပါတယ်။ ဇေဖနိ ၃း၃ မှာ ညဉ့်၌ လှည့်လည်သော တောခွေးများ (evening wolves - ညဦးယံတောခွေးများ) မဿဲ၇း၁၅ မှာ ကြမ်းတမ်း၊ ဆာလောင်သော တောခွေး- ravenous wolves တမန်တော် ၂၁း၂၉ မှာ grievous ကြမ်းတမ်းသော တောခွေးများဖြစ်ပါတယ်။
ဇေဖနိ ၃း၃ က ညဦးယံ တောခွေးများဟာ နားလည်ရခက်တဲ့ ယုဒရှကာယုတ်- တွေပါပဲ။ ကိုယ့်ကို အနိုင်လှဲသွားနိုင်သူတွေပါပဲ။ ချောင်မှာထိုင်ပြီး အကြံထုတ် ကမောက်ကမတွေလုပ် စိတ်ပုပ်တဲ့သူပါဘဲ။ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးပေမယ့် အမှုတော်ကိုတော့ သူက ဖျက်မပစ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလူဟာ ကိုယ်နဲ့ အနီးကပ်လျှောက်လှမ်းနေသူပါ။ ကိုယ်နဲ့ ရင်းနှီးပြီး ကိုယ့်ကို ဖနောင့်နဲ့ ပေါက်မယ့်သူပါ။ ယုဒဟာ အတွင်းလူတယောက်ပါ။
မဿဲ ၇း၁၅ မှာ ဖျက်စီးတတ်တဲ့ ကြမ်းတမ်းဆာလောင်တဲ့ တောခွေးတွေအကြောင်း ပြောထားပါတယ်။
အခု စည်းဝေးကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာက သက်သေခံ ဝိညာဉ်ရယူခြင်းနှင့် နိုးထမှုအတွက်ပါဘဲ။ ဒီမှာ ကြိုးစားခံယူပြီး အသင်းတော်ပြန်၊ ငိုယိုဆုတောင်း တအိမ်ဝင်တအိမ်ထွက် ကြိုးစားသက်သေခံတာတွေကို အားကုန်အင်ကုန် လုပ်ပေမယ့်လည်း၊ အဲဒီ ကြမ်းတမ်းတဲ့တောခွေး ဆာလောင်တဲ့၊ ဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ တောခွေးတွေကို မှတ်မထားရင်၊ လုပ်သမျှ အလကားဖြစ်ကုန်မယ်။ ကြိုးစားထားသမျှကို တောခွေးတွေက အကုန်ဆုတ်ဖြဲပစ်မှာပဲ။
တမန် ၂၀း၂၉ မှာ အကြီးအကျယ် ဝမ်းနည်းစေအောင်လုပ်မယ့် တောခွေးတွေအကြောင်း ပြောထားပါတယ်။
ဘုရားဝတ်မှာ မွေ့လျော်တဲ့ မိတ်ဆွေ သင်းအုပ်တယောက်က- သူနဲ့ သူ့ဇနီးက ကျွန်တော်နဲ့ ကျွန်တော့ဇနီးဆီကို လာပြီး စကားပြောနိုင်မယ့်အချိန်ကို သိချင်တယ်လို့ ဖုန်းနဲ့ တောင်းဆိုလာတယ်။ သူတို့ တံခါးဝကို ဖြတ်လာချိန်မှာပဲ သူ့ဇနီးဟာ အတော်စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေမှန်း မြင်သာနေတယ်။
အသင်းတော်မှာ သူကြိုးစားလုပ်နေသမျှကို တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ဥာဏ်များတဲ့ လူတယောက် ဦးဆောင်တဲ့ အုပ်စုတစုကြောင့် သူခံရတဲ့ဒုက္ခတွေ အခြေအတင်ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတယ်။ သူက “ကျွန်တော် သက်သေခံပြီး ဝိညာဉ်ရယူနေတဲ့အထိ လူသစ်တွေ ပါဝင်လာတဲ့အထိ သူတို့ပျော်နေပါသေးတယ်။ ပြောပါဦးဆရာ ကျွန်တော်သက်သေခံတာကို မလုပ်စေချင်ကြပဲ- ဘာကြောင့် သင်းအုပ်လို့ ကျွန်တော့ကို ခေါ်နေကြသေးလဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
သူက ဆက်ပြီးတော့ “ဆရာ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်သမျှ အကောင်းဆုံးတိုက်ခဲ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒီညနေရောက်တော့ ကျွန်တော့ဇနီး သူက (သူ့ဇနီးက ခေါင်းငိုက်စိုက်ကျပြီး မျက်ရည်တွေ ကျနေတယ်။) --- သေနတ်ကိုယူပြီး သူ့ကိုယ်သူ သတ်သေဖို့ ကြိုးစားပါတော့တယ်။ တခုခုတော့ လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီဆရာ” - သူက အသက်တောင်မရှူနိုင်ဘဲ “ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ မသိဘူးဆရာ” လို့ ပြောဖူးပါတယ်။
အခြေအနေက အစစအရာရာ ထူးခြားနေတယ်။ အမှုတော်အတွက်ဆို ဘယ်သူမဆို အချိန်အတော်အတန် အောင့်အီးသည်းခံကြဖို့ လိုတာမှန်တယ်။ ပြဿနာဖြစ်ချိန်မှာ ရှောင်ထွက်တာ၊ ပြေးထွက်တာ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခုကိစ္စမှာတော့ ကျွန်တော်က “ငါ့ညီရာ မင်းအဲဒီအသင်းတော်ကို ဦးမဆောင်ခင်ကတည်းက ငါ့ကို တိုင်ပင်ခဲ့ရင်ကောင်းမှာ၊ အဲဒီအသင်းတော်က လူတွေဟာ လူကောင်း ၂ယောက်၊ ၃ယောက်ကို ဖျက်စီးပစ်လိုက်ကြပြီးပြီကွ၊ ငါ့ဇနီးကိုတော့ အဲဒီအသင်းတော်အတွက် မစတေးလိုက်နိုင်ဘူးကွာ။ မင်းလည်း အကောင်းဆုံး ကြိုးစားလုပ်ခဲ့ပြီဘဲ။ သူတို့က သင်းအုပ်လုပ်ခွင့်မပေးရင် ငါတော့ ငါ့ဇနီးနဲ့ ငါ့မိသားစုကိုခေါ်ပြီး၊ ငါ့မြင်း ငါခိုင်းပြီး၊ မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအထိ စီးသွားလိုက်မှာပဲ။ ဒီအသင်းတော်ကို မင်းလက်လွှတ်လိုက်ရရင် တခြားအသင်းတော်တခု ရနိုင်တာပဲ။ မင်းဇနီးနဲ့ သားသမီးတွေကိုတော့ ခါးသည်းတဲ့ဒုက္ခတွေ ဆက်မကြုံပါစေနဲ့တော့” လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
ငှက်ကလေးတွေ၊ ပျားကလေးတွေနဲ့ နွားတွေဟာ major key နဲ့ သီချင်းဆိုကြ ညဉ်းကြပေမယ့် တောခွေးတွေကတော့ minor key နဲ့ အူတတ်ကြတယ်လို့ လူတယောက်က ပြောဖူးပါတယ်။
တောခွေးတွေအကြောင်း လေ့လာကြည့်တော့ တောခွေးအူသံဟာ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အသံ သင်းအုပ်ဆရာသိနိုင်တဲ့ အသံတမျိုးလို့ သိလာရပါတယ်။ အသင်းသားတွေက အဲဒီကြောက်လန့်စရာအသံကို မသိပေမယ့် သင်းအုပ်က ခွဲခြားတတ်တယ်။ သင်းအုပ်က ခန္ဓာ၊ နားနဲ့ ကြားတာတော့မဟုတ်ဘူး။ စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ ကြားတာပါ။ အဲဒီတော့ ဒီမနက်မှာ တောခွေးတွေအပေါ် ကျွန်တော် တံပိုးမှုတ်ပါမယ်။
ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တဲ့အချက်က -----
၁။ တောခွေးတွေဟာ ဇာတိတပ်မက်မှုတွေရှိတယ်။
တောခွေး မလာစေချင်ရင် တောခွေးနားသွားပြီး အညစ်အကြေး မစွန့်ပါနဲ့။
ကျွန်တော့အိမ်က တဖက်ပိတ်လမ်းကျဉ်းလေးထဲမှာ ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ တောထဲက critter အကောင်ပလောင်လေးတွေ အများကြီးထွက်လာတယ်။ အိမ်နောက်ဖေး ဆင်ဝင်ပတ်လည်မှာ အများကြီးပဲ။
ကျွန်တော်က ကျွန်တော့ဇနီးကို “Honey ဒီလောက်အများကြီးတခါမှ မမြင်ဖူးဘူးကွာ” လို့ တောင် ပြောမိတော့တယ်။
ကျွန်တော်က စိုးရိမ်ကြီးတတ်တဲ့သူဆိုတော့ ညဖက်မှာ အိပ်ယာကထ ၊ လမ်းလျှောက်ပြီး ဘုရားသခင်ထံမှာ အဖြေရှာ - ဆုတောင်းစကားပြောလေ့ရှိတယ်။ နောက်ဖေးပြတင်းပေါက်က လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ - တောကြောင် တကောင်ကောင် - ဝပ်နေတာ - ထိုင်နေတာကို မြင်ရတယ်။ ပထမတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ ကျွန်တော့် ဇနီးက စားကြွင်းစားကျန်တွေ နောက်ဖေးဘက် - လွတ်ပစ်တာ အိမ်ကခွေးကို ချကျွေးတာကို ကျွန်တော် မသိခဲ့ဘူး။
အဲဒီ - အကောင်ပလောင်လေးတွေက . . အဲဒီအကြွင်းအကျန်တွေဆီကို လာအနံ့ခံတယ်။ အညစ်အကြေးတွေဆီကို လာကြတယ်။ အိမ်ကခွေးက - အကုန်မစားနိုင်ဘူး။ နောက်တော့ - ကျွန်တော့်ဇနီးက - သားသမီးတွေကို မှာထားရတော့တယ်။ ကလေးတွေကလည်း အကြွင်းအကျန် အဟောင်းတွေအပေါ်မှာ - အစာသစ်ကို ထပ်ပစ်ချမပေးကြတော့ဘူး။ အင်း - ဒီလိုဆိုတော့ စနစ်တကျ ဖြစ်သွားတာပေါ့။ ဒါပေမယ့် - အညစ်အကြေးတွေကို တခြားတနေရာမှာ သွားပစ်လိုက်နိုင်ရင် . . အကောင်ပလောင်တွေ အိမ်နားမှာ ထပ်လာတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။
အသင်းတော်မှာလည်း အညစ်အကြေးတွေကို ထိန်းတတ်ဖို့လိုတယ်။ အသွေးအသားကိစ္စ သတိထားရမယ်။ တောခွေးအိုကြီးတွေက ပန်းပွင့်တွေ ၊ မြက်ပင်တွေလို အရာမျိုး မစားဘူး။ သူတို့ရှာတာက - အသေတွေ ၊ ဇာတိအရာ ၊ အသွေးအသားအရာတွေပါ။ အသွေးအသားကို သတိထားရမယ်။ ဒါဆို- တောခွေးတွေ ဝိုင်းမနေတော့ဘူး။ အိမ်တော်ကို သန့်သန့်ရှင်းရှင်း ထားဖို့လိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အသင်းတော်ဟာ လူတိုင်းကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် - သံစုံသီချင်းဆိုချိန် တပင်တိုင် သီချင်းဆိုချိန်နဲ့ သင်ကြားချိန် ၊ အလှူငွေကောက်ခံချိန်တွေမှာ - ပါဝင်သူတိုင်းဟာ သခင်ယေရှုရဲ့ အသက်တာကို အတုယူဖို့လိုတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ - သခင်ဘုရားရဲ့ ဘုန်းထင်ရှားဖို့ လိုတယ်။ ဇာတိသဘောဆန်တဲ့ - ခေတ်သစ် - ဧဝံဂေလိ - ခပ်လှုပ်လှုပ် - ခပ်ရမ်းရမ်း သီချင်းမျိုးတွေက - ဘုရားဘုန်းတော် ထင်ရှားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော့ အတွက်တော့ အချို့ဘုရားကျောင်းတွေ သွားဖို့၊ နောက်ခံ-တေးဂီတ အသံတွေကြားဖို့ဆိုတာ စိတ်ပျက်မိတယ်။ ဒီလိုတေးဂီတ - သီချင်းတွေကို အသင်တော်မှာ သတိထား- ထိန်းသိမ်းရမယ်။
ကျွန်တော်သွားဖို့ စိတ်ပျက်တဲ့ ဘုရားကျောင်းမျိုးကတော့ - သံစုံသီချင်းဆိုချိန်မှာ - အုပ်စုလိုက် ချီတက်ပြီးဝင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေက မလုံမခြုံဝတ်တဲ့ အသင်းတော်မျိုးပါဘဲ။ အမျိုးသမီးတွေ အဲဒီလို marching လုပ်ပြီး - ချီတက်လာတာကို မြင်ရတော့ အမျိုးသားတွေအဖို့ သင်ထားတဲ့ ကျမ်းစာနဲ့ ကျမ်းချက်တွေ - ဘယ်ဆင်ခြင် နိုင်တော့မလဲ။ အမျိုးသမီးတွေ လုံလုံခြုံခြုံ ဝတ်ကြပါ။ လည်ဟိုက်ကလည်း ရှိသင့်သလောက်ပေါ့။ စကတ် ထမီကလည်း ရှိသင့်တဲ့ အရှည်လောက် ဝတ်ကြပါ။
ဒီ Gospel Light နှစ်ခြင်းအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ သီချင်းပုံစံမျိုးကို ကျွန်တော် သဘောကျတယ်။ ဒီမှာဆိုတဲ့ သံစုံသီချင်းက အလှပြမဟုတ်ဘူး။ အလှပြ တင်ဆက်မှုတွေ ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ အစီစဉ်တိုင်းမှာ ဘုရားသခင်အလိုတော်နဲ့ နည်းလမ်းတွေကို အခွင့်ပေးကြစို့။
၂။ တောခွေးတွေဟာ ဒုက္ခရောက်သူတွေကို သဘောကျတယ်။ ကြည့်ရှုချင်တယ်။
တောခွေးတွေကို လေ့လာကြည့်တော့ သူတို့ဟာ ကျောက်ဆောင်အစွန်နားမှာ လေးလေးကန်ကန် လမ်းလျှောက်ရင်း လူတွေ၊ အရာဝတ္ထုတွေကို အပေါ်စီးက ကြည့်ရတာကို သဘောကျကြတာ တွေ့ရတယ်။
အသင်းတော်မှာ ကြည့်လို့ရှုလို့ ရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ ထိုင်ဖို့နှစ်သက်တဲ့ တောခွေးတွေကို မြင်ဖူးသလား။ သူတို့ဟာ လက်ပိုက်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ မတ်တပ်ရပ်ချင်ရပ်နေမယ်။ ဧည့်ကြိုအဖွဲ့ထဲမှာ ပါလိမ့်မယ်။ တခြားသူတွေအတွက် ခုံနေရာရှာပေးမယ့်အစား တရားဟောဆရာ တရားစဟောချိန်မှာ အပေါက်ဝဖက်ထွက်ပြီး တရားဟောတာမပြီးမချင်း အနားကလူတွေနဲ့ စ-နောက် နေလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေထိန်းဖို့ ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် ကိုယ့်အလှည့်ကျရင် သတိထားပါ။ အချို့အမျိုးသမီးတွေက ဘုရားရှိခိုးချိန်မှာမှ ကလေးထိန်းတဲ့အခန်းဖက် လာချင်ကြတယ်။ “ဘုရားသခင်နှင့် စပ်ဆိုင်သောသူသည် ဘုရားသခင်၏ စကားတော်ကို နားထောင်တတ်၏” (ယော၈း၄၇) အသေးအမွှားပြဿနာတခုခု ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အဲဒီလူမျိုးက မဟုတ်တဲ့ဘက်က ပါချင်ပြီ။ သတိထားကြစို့။
တောခွေးဟာ အုပ်စုထဲမှာ ဧရာမဘိုးအေကြီး လုပ်ချင်တယ်။ ကော်မတီထဲမှာလည်း ပါချင်တယ်။ ကျမ်းစာထဲမှာ သင်းထောက်လို့ပဲ တွေ့ရတယ်။ ကော်မတီဆိုတာမျိုးကို တခါမှမတွေ့ရ ဘူး။
ကော်မတီဆိုတာက စည်းဝေး ခဏခဏခေါ်ချင်တယ်။ သူတို့က သီချင်းဆိုဖို့တော့ မတောင်းဆိုဘူး။ တခြားသူတွေ ကြားလောက်အောင်တော့ “ဘုရားသခင်က အဆိုကောင်းတဲ့ အသံမပေးလို့ပါ။ ဘုရားသခင် အသုံးပြုခံချင်လိုက်တာ” လို့ ပြောတတ်ပါတယ်။ သူတို့နောက်လိုက် တချို့ကလည်း သူတို့သီချင်းဆိုပါဝင်ဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားပါရမီ အစွမ်း talent တခုခုကိုပြဖို့ တောင်းဆိုတတ်ကြတယ်။
အဲဒီကော်မတီဟာ သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ အမှုတော်လုပ်ငန်းထဲမှာပဲ လုပ်ငန်းထဲမှာပဲ လုပ်ငန်းတခု နေရာရှိချင်လာကြတယ်။ ဝိညာဉ်သဘောဆိုပြီး အပြကောင်းချင်တယ်။ “ကိုယ့်အကျိုးစီးပွါးကြောင့် သူ့မျက်နှာကို ထောက်ထားခန့်ညားတတ်သောသူ ဖြစ်ကြ၏” (ယုဒ ၁၆)
လူတယောက်ရဲ့ ပြဿနာအသေးအမွှားအကြောင်း သူတို့ကြားရပြီဆိုရင် ကူညီဖို့ အပြေးအလွှားပါဘဲ။ ကူညီတာကတော့ ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့က အသင်းတော်ကို ကူမပေးမယ့် ဘိုးတော်တွေ ဖြစ်ချင်တာက ခက်တယ်။ အဗရှလုံလိုပဲ အဖေရှင်ဘုရင်ထံ လာတဲ့သူတွေကို “မင်းတို့ပြဿနာကို နားထောင်ပေးဖို့ ဘုရင့် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲထားသူပါ။” လို့ ပြောပြီး သူတို့လက်တွေကို နမ်း၊ ငါ ဒီပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်လို့” ပြောချင်သူတွေပါ။ ဒါဟာ ကြားဖြတ် ညှို့ယူတာပါပဲ။ အဗရှလုံဟာ ကူမမယ့် ဘိုးတော်လုပ်ချင်သူပါဘဲ။ ဒါမျိုးတွေကို ရှာချင်၊ ကြည့်ချင်နေတတ်သူပါပဲ။
ဒီမှာရှိတဲ့ လက်ထောက်သင်းအုပ်တွေ၊ သင်းထောက်တွေ၊ အခြားအဖွဲ့ဝင်တွေကို ကျွန်တော် ပြောချင်တာက ဘုရားသခင်က ခင်ဗျားတို့ သင်းအုပ်ကို အမှုတော်လုပ်ငန်းတခုလုပ်ဖို့ ခေါ်ထားပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ကိုတော့ သင်းအုပ်ရဲ့အလုပ်ကို ကူညီပြီး ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ ခေါ်တယ်။ သူ့လက်တွေ အားမလျော့အောင် ထောက်မကြရမယ်။ ကျမ်းစာမှာ မောရှေဦးဆောင်တဲ့ တိုက်ပွဲကြီးတခုအကြောင်း ပြောထားတယ်။ အာရုန်နဲ့ ဟုရလက်ကို မောရှေလက်နဲ့ ထောက်မတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လက်နဲ့သာ မောရှေလက်ကို ထောက်မရတယ်။
တောခွေးတွေကတော့ သင်းအုပ်ကို မရိုသေကြဘူး။ သင်းအုပ်အမိန့်ပေးတာကို သဘောမကျဘူး။ - ဟေဗြဲ ၁၃း၇၊ ၁၇ မှာ ….
“ဘုရားသခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်ကို သင်တို့အားဟောပြော၍၊ သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့ကို အောက်မေ့ကြလော့။ သူတို့သည် အဘယ်သို့ ကျင့်ကြံပြုမူ၍ စုတေ့သည်ကို စေ့စေ့ဆင်ခြင်လျက်၊ သူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကို မှီအောင်လိုက်ကြလော့။”
“သင်တို့ကို အုပ်သောသူတို့၏ စကားကိုနားထောင်၍ နှိမ့်ချလျက် နေကြလော့။ သူတို့သည် ကိုယ်တိုင်စစ်ကြောခြင်းကို ခံရသောသူကဲ့သို့၊ သင်တို့စိတ်ဝိညာဉ်၏ အကျိုးအလိုငှါ စောင့်နေကြ၏။ သင်တို့အကျိုးကို မဖြစ်စေတတ်သော ဝမ်းနည်းခြင်းမရှိ၊ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိ၍ သူတို့သည် စစ်ကြောခြင်းကို ခံရမည်အကြောင်း သတိပြုလျက်နေကြလော့။”
ဒီကျမ်းပိုဒ်မျိုးကိုတော့ တောခွေးတွေ ဖတ်လေ့မရှိပါဘူး။ သင်းအုပ်ဆရာကို မရိုသေကြတဲ့ တောခွေးတွေက “တို့က လူစကားနားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားစကားနားထောင်တာ” လို့ ဆိုတတ်တယ်။ သင်းအုပ်ဆရာစကား နားမထောင်ဘဲ ဘုရားစကား နားထောင်တယ်ဆိုတာ ဟေဗြဲ ၁၃ အရ မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒုတိယမွေးဖွးပြီး Born again လွတ်လပ်စွာရပ်တည်သူ Independent fundamental အခြေခံ ယုံကြည်ချက်တွေကို ခံယူရပ်တည်တဲ့သူ အနှစ်တထောင်ကာလ မတိုင်မှီ ခရစ်တော် ပြန်ကြွလာမယ်လို့ ယုံတဲ့ဆရာ premillennial preacher ရဲ့ အုပ်စိုးခြင်းကို ဝန်မခံတဲ့သူဟာ ဘုရားစကား နားထောင်တယ်ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
မကြာသေးခင်က အသင်းတော်တပါးမှာ သင်းထောက်တယောက်က သင်းအုပ်ကို “ဆရာက တရားပဲဟောပေါ့။ လုပ်စရာရှိတာတွေတော့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မယ်” လို့ ပြောတယ်။ သင်းအုပ်က ကျွန်တော့ကို ပြောတာကြားရအပြီး ကျွန်တော်က အဲဒီသင်းထောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပြောင်းပေးလိုက်တယ်။
ဒါက မောရှေကိုပြောတဲ့ တောလည်ရာ ၁၆း၁-၅ ထဲက လူတွေနဲ့တူပါတယ်။ “သင်းအုပ်က သိပ်နေရာယူတာပဲ။ သိပ်အာဏာရှိ၊ သိပ်တာဝန်ရှိချင်နေတာဘဲ” လို့ ပြောသလိုပါပဲ။
တောခွေးတွေက သင်းအုပ်ကို မလေးစားဘူး။ သူတို့က ၁ပေ ၅း၁-၄ ကို ထောက်ပြပြီး သင်းအုပ်ဆိုတာ သခင်ယေရှုအောက်က လက်ထောက်သိုးထိန်းပဲ။ ၁ကော ၁၁း၁ မှာ “ငါသည် ခရစ်တော်၏ နည်းတူကျင့်သကဲ့သို့ သင်တို့သည်လည်း ငါ့နည်းတူ ကျင့်ကြလော့။” လို့ ပြတတ်ပြန်တယ်။
ဘယ်အသင်းတော်မှာမှ ဦးခေါင်းဟာ သင်းအုပ်တပါးထက် ပိုမရှိဘူး။ လက်ထောက် သင်းအုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သင်းအုပ်ရဲ့ လက်ထောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သင်းအုပ်ရဲ့အမှုတော်ကို ဘုန်းထင်ရှားစေဖို့ လေးစားဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှ အသင်းတော် တိုးပွါးမယ်။
တောခွေးတွေက သင်းအုပ်ရဲ့အခွင့်အာဏာကို လက်မခံချင်ဘူး။ သင်းအုပ်ရဲ့ အခွင့်အာဏာ ပြရတဲ့အခါ သင်းအုပ်စကားကို လူတွေနားထောင်ပြီး သူတို့စကားကို နားမထောင်တဲ့အခါ သူတို့မှာ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတယ်။
ကျွန်တော်တော့ တောခွေးအူသံ ကြားရတယ်။ တောခွေးတွေအပေါ်မှာ တံပိုးမှုတ်လိုက်ပြီ လို့ ထင်တယ်။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။
၃။ တောခွေးရှိသမျှဟာ ဗိုလ်လုပ်ချင်ကြတယ်။
တောခွေးရှိသမျှဟာ ဗိုလ်လုပ်ချင်ကြတယ်။ သင်းအုပ်ကို သိပ်မလေးစားဘူး။ တောခွေးခေါင်းဆောင်၊ တောခွေးဗိုလ်ကြီးအကြောင်း လေ့လာကြည့်တော့ သူရှိတဲ့အတွက် တခြားတောခွေးတွေက ဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့ ထင်ခဲ့တာ။ တကယ်တော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ အဲဒီနေရာကို တိုက်ပြီးယူခဲ့တာ။ တောခွေးအုပ်ထဲမှာ အားလုံးက ဗိုလ်လုပ်ချင်သူတွေချည်းပဲ။ ဒါပေမယ့် တောခွေးဗိုလ်ကြီးက တခြားတောခွေးတွေအားလုံးကို သူ့အနားမှာ စုစုဝေးဝေး နေစေချင်တယ်။
တောခွေးတွေက သင်းအုပ်ဆရာကို ဘုရားသခင်ရဲ့လူအဖြစ် မလေးစားချင်ဘူး။ အားလုံးက ဗိုလ်ပဲလုပ်ချင်နေတယ်။ သူပြောတာက “ဆရာနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးတွေ့ချင်တာ--- ပြောရမှာတော့ အားနာပါတယ်ဆရာ၊ လူတွေက ကျွန်တော့ကို လာလာပြောနေတော့ ” “ဒီလိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကိုယ့်အနားမှာ တောခွေးတကောင် ရောက်နေပြီသာမှတ်။”
“ဆရာ လူတွေက ကျွန်တော့ဆီလာလာပြီး--- တဲ့” တောခွေး ဟုတ်မဟုတ် သေသေချာချာ သိချင်ရင် “ဘယ်သူတွေများလဲ” လို့ ပြန်မေးလိုက်ပါ။ ပြောမပြရင် တောခွေးဆိုတာ သေချာပြီ။
“ဆရာ လူတွေက ကျွန်တော့ဆီ လာလာနေတယ်။ ကျွန်တော် ဆရာ့ကို အကူအညီ ပေးနိုင်သမျှတွေကိုတော့ ဆရာသိစေချင်တယ်။” လို့ ဆိုလာတဲ့အခါ မိတ်ဆွေသဘောမျိုး နေရာ ယူနေပါပြီ။ ဒါက အနမ်းတချက်နဲ့ အပ်နှံမယ့် ယုဒပါပဲ။
“ဆရာ့ကို သိစေချင်တာက--- ” ဆိုတဲ့ စကားအရ သင်းအုပ်ဆီကို မလာဘဲ သူ့ဆီကို သွားနေတဲ့ သူတွေရှိနေတယ်။ အဲဒီပြဿနာကို သူကိုင်တွယ်နေရတယ်ဆိုပြီး ရင်ထဲမှာ ပျော်ရွှင် ဝမ်းမြောက်နေတာပေါ့။ သင်းအုပ် မကိုင်တွယ်နိုင်တာတွေကို သူကိုင်တွယ်နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပျော်နေတာပေါ့။
“ဒါကြောင့် ဒီလူတွေ ဘယ်သူဆိုတာ ကျွန်တော်မပြောပြနိုင်ဘူး။ သူတို့က ယုံကြည်စိတ်ချလို့ ပြောပြထားတာ” လို့ ဆိုတတ်တယ်။ ကဲ မိတ်ဆွေတို့ ခင်ဗျားဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ လူကို အပ်နှံသူလား၊ ဘုရားသခင်ရဲ့အသင်းတော်ကို အပ်နှံသူလား။ ဘုရားသခင်ရဲ့ အမှုတော်ကို အပ်နှံသူလား။ သိပ်ရှက်စရာကောင်းပါတယ်။
၄။ တောခွေးတွေဟာ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်ချယ်လှယ်ကြတယ်။
တောခွေးတွေဟာ အကွယ်အကာ နောက်ကွယ်ကနေ တိုက်ခိုက်တတ်တဲ့ သဘောရှိတယ်။ တောခွေးဗိုလ်ကြီးက ရှေ့ကနေ ခပ်သုတ်သုတ်ကလေး ပြေးနေမယ်။ သူ့ညာဖက်မှာ ပိန်ပိန်ပါးပါး တောခွေးမက ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးလိုက်တယ်။
တောခွေးဗိုလ်ကြီးက တောက်လျှောက်ပြေးနေတယ်။ တခါတရံမှာ သူ့ခေါင်းကို ညာဖက်လှည့်လိုက်၊ နောက် ဘယ်ဖက်လှည့်လိုက် လုပ်တယ်။ တောခွေးမက ညာဖက်မှာ နေရာယူရင် သူ့ခေါင်းကို ညာဖက်လှည့်တယ်။ တောခွေးမက ဘယ်ဖက်မှာ နေရာယူရင် သူ့ခေါင်းကို ဘယ်ဖက်လှည့်တယ်။ အဲဒီတော့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ဦးဆောင်နေတာက တောခွေးဗိုလ်ကြီး မဟုတ်တော့ဘဲ သူ့ဘေးမှာ ခပ်သုတ်သုတ်ပြေးနေတဲ့ တောခွေးမလေးက အမိန့်ပေးနေသလို ဖြစ်နေတယ်။
သင်းအုပ်ကတော်ဖြစ်ရသူတွေ-- သတိထား။ အဲဒီနေရာကို ရဖို့အတွက် တောခွေးများစွာ သေခဲ့ရတယ်။ သတိမထားရင် ကိုယ့်ခင်ပွန်း သင်းအုပ်ဆရာအသက်တာ သေသွားနိုင်တယ်။
သင်းအုပ်ဆရာတယောက်အကြောင်း ကြားဖူးတယ်။ သူက နှစ်ခြင်းပေးနေတာပါ။ ပြီးတော့ ဘေးတံခါးကနေထွက်ပြီး နှစ်ခြင်းခံပြီးလို့ ထွက်လာသူတွေကို လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်။
အဲဒီမှာ သင်းထောက်တယောက်က ဆေးလိပ်သောက်နေတယ်။ သင်းအုပ်က အထိတ်တလန့်ဖြစ်ပြီး သူ့ကို “အိမ်မှာသောက်တာကတော့ ခင်ဗျားအပိုင်းပေါ့ဗျာ၊ ဘုရားကျောင်းဝမှာတော့ ရပ်မသောက်ပါနဲ့ဗျာ” လို့ ပြောလိုက်တယ်။
သင်းထောက်က စီးကရက်ကို လွင့်ပစ်လိုက်ပြီး “ဒီမှာဆရာ၊ ခင်ဗျား မရောက်ခင်ကတည်းက ကျုပ်က ဒီအသင်းတော်မှာ ရှိနေတာ။ ခင်ဗျားမရှိတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ကျုပ်ရှိနေချင် ရှိနေဦးမှာပဲ။ ကျုပ်သောက်ချင်တဲ့နေရာ၊ သောက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ သောက်ရမှာပဲ” လို့ ပြောတယ်။ သင်းအုပ်က “ကောင်းပြီ၊ ဘုရားသခင် ကြည့်စီရင်ပါလိမ့်မယ်- ဟုတ်လား” လို့ ပြန်ဖြေတယ်။ ပြောတော့
“အင်း- ကောင်းတာပေါ့” လို့ ဖြေတယ်။ အဲဒီအချိန်ဟာ တနင်္ဂနွေမနက်ပါ။ သူက ကုန်တင်ကားမောင်းတဲ့လူပါ။ နောက်တနေ့ သွားရမယ့်နေရာရောက်ဖို့ နာရီအများကြီး ဆက်မောင်းရဦးမှာပါ။
တနင်္လာနေ့မနက် ၂ နာရီ ၃နာရီလောက်မှာ အဲဒီလူရဲ့မိန်းမက သင်းအုပ်ကို ဖုန်းဆက်တယ်။ ငိုပြီးတော့ “ဆရာရေ ဒုက္ခပဲ ဒုက္ခပဲ” လို့ ဆိုတယ်။
“ဘာဖြစ်လို့လဲ” ဆိုတော့ - ခရီးမသွားခင်နားဖို့ တည်းခိုခန်းတခု ရှာထားတယ်။ အိပ်ယာထဲမှာ ဆေးလိပ်သောက်နေလျက်သားနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အိပ်ယာမီးလောင်ပြီး သူသေသွားတယ်။ သူသောက်ချင်တဲ့နေရာ၊ သောက်ချင်တဲ့အချိန်မှာ စီးကရက်သောက်ခဲ့သူဟာ၊ ဘုရားသခင်နဲ့မှ ထိပ်တိုက် သွားတွေ့တော့တာကိုး။
Carl Lackey - အကြောင်း ပြောစရာအများကြီး ကျွန်တော့မှာ ရှိပါတယ်။ တခါက လူတယောက်က သူ့ကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတယ်။ အဲဒီလူက အနားရောက်လာပြီး ကားပြတင်းပေါက်ကို ချကာ ဆရာ Lackey ကို ကျိန်ဆဲသွားတယ်။ ပြီးတော့ ကားဆက်မောင်းသွားကာ လမ်းဘေးမှတ်တိုင်ကျောက်ကို ကျော်ပြီး သစ်ပင်ကို ဝင်ဆောင့်ကာ သေရတယ်။
ဘုရားသခင်ရဲ့လူကို ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတာကို သတိပြုပါ။ နောက်ကွယ်မှ ကြိုးကိုင်၊ ချယ်လှယ်ချင်သူတွေ သတိထားပါ။
“ငါအမျက်ပျင်းထွက်လျက် သင်တို့ကို ထားဘေးဖြင့် ကွပ်မျက်မည်။ သင်တို့မယားများသည် မုဆိုးမဖြစ်၍၊ သားသမီးများသည်လည်း မိဘမရှိသောသူငယ်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်။” ထွက်မြောက်ရာ ၂၂း၂၄။
ဧလိရှဲရဲ့ ငယ်ထိပ်ပြောင်တာကို လှောင်ပြောင်ကြတဲ့ ကလေး ၄၂ ယောက်ကို ဝံမတွေ ထွက်လာပြီး ကိုက်ဖြတ်ပစ်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဒီအကြောင်းမတိုင်ခင် ရှေ့အခန်းကြီးက ဣသရေလလူတွေရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကြောင့်ပါဘဲ။
“လူငါးကျိပ်အုပ်သော တပ်မှူးကိုစေလွှတ်၍၊ တပ်မှူးသည် တောင်ပေါ်မှာထိုင်သော ဧလိယထံသို့ ရောက်ပြီးလျှင်၊ အိုဘုရားသခင်၏လူ သင်သည် ဆင်းရမည်အကြောင်း ရှင်ဘုရင် အမိန့်တော်ရှိသည်ဟု ဆို၏။ ဧလိယကလည်း ငါသည် ဘုရားသခင်၏လူမှန်လျှင် ကောင်းကင်က မီးကျ၍ သင်နှင့် သင်၏လူငါးကျိပ်တို့ကို လောင်ပါစေ ဟု လူငါးကျိပ်အုပ်သော တပ်မှူးအား ဆိုသည့်အတိုင်း ကောင်းကင်က မီးကျ၍ သူနှင့် သူ၌ပါသော လူငါးကျိပ်တို့ကိုလောင်လေ၏” (၄ရာ ၁း၉၊ ၁၀)
ဒါမျိုးနှစ်ကြိမ် ဖြစ်ခဲ့တယ်။ တတိယတပ်မှူးကတော့ မဆိုးဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ တရားစီရင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ လူတွေရဲ့စိတ်သဘောကို တွေ့မြင်ရနိုင်တယ်။
သင်းအုပ်အကြောင်းပြောရင် လေးစားစွာပြောရမယ်။ ဘယ်သူမှ အိပ်ယာထဲမှာ “အင်း-မင်းသိလား၊ သင်းအုပ်က အဲဒီလိုလုပ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ငါတော့ အဲဒီလိုမလုပ်ချင်ဘူး” လို့တောင် စကားအားဖြင့် မပြောသင့်ဘူး။
၅။ တောခွေးက သင်းအုပ်ကို အသင်းတော်အပေါ် ဦးဆောင်ခွင့်မပြုဘူး။
ကျွန်တော့လက်ထောက် သင်းအုပ်က အရင်က သူသင်းအုပ်လုပ်ဖူးတဲ့ အသင်းတော်မှာ သာသနာပြုဆရာတယောက် စေလွှတ်စရာရှိခဲ့တယ်။ အသင်းသားတွေရဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချမှု ရဖို့လိုသေးတယ်လို့ ပြောပြတော့ အသင်းသားတွေက “ဆရာ စစ်ဆေးပြီးပြီလား” လို့ မေးတယ်။ ပြီးတဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့ သူတို့က “ကျွန်တော်တို့ ကြားချင်တာက ဒီစကားပဲ” ဆိုပြီး သာသနာပြုဆရာကို စေလွှတ်ဖို့ မဲပေးကြတယ်။
သင်းအုပ်က “အဲဒီ သာသနာပြုဆရာဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ဝတ်မှာ မွေ့လျော်သူတွေအပေါ် လူငယ်တွေက ယုံကြည်မှုမရှိအောင် ဖျက်ချနေတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်ကို ကျွန်တော် ပြောမပြချင်ဘူး ဆရာ” လို့ ဆိုတယ်။
တောခွေးဟာ သင်းအုပ်ကို အသင်းတော်ဦးဆောင်ခွင့် မပေးချင်ဘူး။
ကျွန်တော်ကြားဖူးတဲ့ ဖြစ်ရပ်တခုကို ကြားရသလို ပြန်ပြောပြချင်တယ်။ လက်မထပ်ရသေးတဲ့ ၁၅နှစ်အရွယ် ကလေးမတယောက်ဟာ ကလေးရမယ့် အခြေအနေမှာရှိနေပြီ။ သင်းအုပ်က စိတ်ကြေကွဲနေတဲ့ မိသားစုကို ခေါ်တွေ့တယ်။ မိန်းမငယ်က ထွက်သွားပြီး ပြန်မလာဘဲ နေတော့မယ့်သဘော။ သင်းအုပ်ကတော့ သူ့အသက်ကို ကယ်ဖို့နဲ့ ဘုရားသခင်နဲ့ မှန်ကန်စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ဖို့ ကူမဖို့ ကြိုးစားနေတယ်။
အဲဒီအချိန်မှာ Miss wiggle Jaw - ဒေါ်မေးခါ ရောက်လာတယ်။ “ဆရာ ဒီကိစ္စ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။”
“ကောင်းပါပြီ တခုခုကို အခု မြန်မြန်လုပ်သင့်တယ်။ ဘယ်မိန်းကလေးမှ အသင်းတော်ထဲမှာ ဒီလို မဖြစ်သင့်ဘူး။ မရှိသင့်ဘူး”
“ကောင်းပါပြီ ကျွန်မအထင်တော့ ဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့ ပြဿနာပဲ --- စသည်ဖြင့် --- စသည်ဖြင့်--- ပြောသွားပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးက နီးစပ်ရာတွေကို သွေးဆောင်တော့ နောက်လိုက်အုပ်စုလေးတခု ဖြစ်လာတယ်။ ပြီးတော့ မကြေမနပ်အသံတွေ စဖြစ်အောင် လုပ်လာတယ်။
၂ရက်-၃ရက်လောက် ဟောင်ပွါ-ဟောင်ပွါ ပြောပြီးနောက်မှာတော့၊ တယောက်ယောက်က ကလေးအဖေဟာ ခင်ဗျားသားဘဲလို့ ကပ်ပြောသွားပါတော့တယ်။
အဲဒီနောက်တော့ သူ့ပါးစပ် ပိတ်သွားတယ်။ သင်းအုပ်က ထုတ်ပစ်တာ၊ ဒေါသထွက်တာတွေ မဖြစ်စေချင်တော့ဘူး။ သင်းအုပ်က လူတွေကို ကူညီမစ၊ ချစ်တတ်သနားတတ် သေလုဆဲဆဲလူတွေကို ပြုစုတတ်ဖို့ပဲ ဖြစ်စေချင်လာတော့တယ်။
အသင်းသားတယောက်က သူ့အိမ်မှာ လူတစုကို ရေကူးဖို့ ခေါ်ချင်တယ်။ သူ့အိမ်မှာ ရေကူးကန်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်းအုပ်ဆရာက “ဘက်စကက်ဘောတော့ ဘာကြောင့် မကစားလဲ၊ ဒါမှမဟုတ် ဘောလုံးကန်ဖို့ သွားပါလား၊ ဒါမှမဟုတ် တခြားတခုခု ကစားပါလား။
ဆရာက အဲဒီလူဟာ လိင်တူဆက်ဆံသူတယောက်ဆိုတာ ၉၅% လောက် သေချာတာကို သူ့လူတွေကို ပြောမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ ရေကူးရင်း ကောင်လေးတွေ ဖေါက်ပြန်တပ်မက်မှုတွေ ဖြစ်လာမယ့်အရေးက ကာကွယ်ဖို့ သူကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ ပြောမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။
ဒါပေမယ့် အဲဒီမှာ တောခွေးတွေ ပါလာပြီ။ တံဖိုးမှုတ်ဖို့ လိုလာပြီ။ “ကောင်းပြီ၊ ကျွန်တော် ရှင်းပြမယ်။ ယောက်ျားလေး၊ မိန်းကလေး ရောပြီး ရေကူးတာ အဝတ်အစားမဲ့ ရောနေတာ မကောင်းဘူး။ ဒါပေမယ့် အိမ်တအိမ်မှာ ယောက်ျားလေးတွေ ရေကူးကြတာတော့ ဘာမှ မကောင်းပါဘူး။
သင်းအုပ်က အသင်းတော်ကို ဦးဆောင်ပါစေ။ ပြောမပြနိုင်ပေမယ့် သူသိတာတွေ ရှိနေတယ်။ သူ့သံသယကို သူပြောလိုက်ပြီး သက်သေမပြနိုင်ရင် အသင်းတော်ကို ကွဲပြားစေသလို ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ အဲဒီလူက အသင်းတော်သံစုံမှာ ဝင်ဆိုနေတဲ့သူ။ ဆရာက အသင်းတော် မပျက်စီးမကွဲပြားဘဲ အဲဒီလူကို ဖယ်ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားဖို့ စီစဉ်နေရတယ်။
သင်းအုပ်ဆရာကို အခွင့်ပေးကြပါ။ အသင်းတော်ကို သူဦးဆောင်ပါစေ။
၆။ တောခွေးရန်က ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းတခု
တောခွေးရန်က ကာကွယ်ဖို့ သင်းအုပ်အတွက် ကာကွယ်နည်းလမ်းကောင်းတခုဟာ တောခွေးစောင့် ခွေးကောင်းကောင်းတကောင်ပါဘဲ။ ခွေးမွေးပွကလေးတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ခြေယိုင်ယိုင်နဲ့ ထွက်ထွက်လာတတ်တဲ့ ခွေးမျိုးကိုသာ ဆိုလိုတယ်။ သူ့အမေက ခွေးဘီလူးမျိုး။ သူ့အဖေကိုတော့ သူမတွေ့ဖူးဘူး။ ခွေးလေခွေးလွင့်ထဲကလို့ပဲ သူကြားဖူးတယ်။ သူ့နားရွက်တဖက်က ပဲ့နေပြီ၊ သူလမ်းလျှောက်ရင် သူ့ပုခုံးတွေက နိမ့်တုံမြင့်တုံနဲ့လာတဲ့ တောခွေးစောင့် ခွေးတကောင်ပါပဲ။
သင်းအုပ်တိုင်းမှာ တောခွေးစောင့် ခွေးကောင်းကောင်းတွေ ရှိဖို့လိုတယ်။
အသင်းတော်ကြီးတခုက ကျွန်တော့မိတ်ဆွေ တရားဟောဆရာမှာ အသင်းသား ၁၅၀၀ လောက်ရှိတယ်။ သူက ၆ပေ၃လက်မလောက်ရှိတဲ့ လူတယောက်ကို သက်သေခံပြီး ရလိုက်တယ်။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီး သိပ်မကြာခင်မှပဲ သူ့ဆရာက သက်သေခံဖို့ခေါ်သွားတယ်။ အဖြစ်အပျက်ကလေးကို သူ့သင်းအုပ်ဆရာ ပြောပြပုံကတော့ ….
“ကျွန်တော်တို့ သက်သေခံဖို့ တနေရာ နှစ်နေရာလောက် သွားတယ်။ ပြီးတော့ မတွေ့ရတာ ကြာပြီဖြစ်တဲ့ အသင်းသားတယောက်ရဲ့အိမ်ကို ဝင်တယ်။
“ခင်ဗျားကို မတွေ့ရတာကြာပြီနော်” လို့ ပြောတော့ အေးစက်စက်နဲ့ “အင်း ဘယ်တွေ့မလဲ” လို့ ပြောပါတယ်။
“တခုခု မှားနေလို့လားဗျာ။” “အင်း မှားတယ်။” “ဘာမှားလဲဗျာ။”----
“ဆရာ …… ပြောချင်တာတွေက…. ဆိုပြီး - သိပ်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ပြောလာတယ်။
အဲဒီလို ပြောနေတုန်း ကျွန်တော့လူသစ်က ဗလကြီးဆိုတော့ လည်တိုင်ကို ဆွဲအစ်လိုက်ပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ် ဆွဲလှဲချလိုက်တယ်။ “မင်းအသက်ရှင်နေသရွေ့ ငါ့ဆရာအကြောင်း ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့ ကြားလား” လို့ ဆိုတယ်။
သူမပြောတော့ဘူး။ ကျွန်တော့အကြောင်းတောင် မကောင်းမတွေးတော့ဘူး။- လို့ ပြောပါတယ်။
ဒီလိုအပြုအမူမျိုး ကြမ်းပြလိုက်တာကို သဘောတူသလား။ မတူပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သင်းအုပ်ဆရာတယောက်ဟာ သူ့လူသူ အမြဲတမ်းထိန်းပေးနိုင်စွမ်း မရှိနိုင်ဘူး။
ဒီက သင်းအုပ်တွေမှာလည်း ဘုရားဝတ်မှာမွေ့လျော်တဲ့သူ ၄၊ ၅ယောက်လောက် ရှိသင့်တယ်။ မကြေမနပ် ပြဿနာလုပ်တဲ့လူတယောက်ကို စည်းဝေးခန်းမထဲကနေ မြက်ခင်းပြင်ဘက် ဆွဲထုတ်ပြီး “ဟေ့ မင်း …… တို့ဆရာအကြောင်း မကောင်းပြောနေတာ ကြားရတာ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပဲ ဖြစ်ချင်တယ်နော်၊ ဒါပေမယ့် တို့ဆရာအကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ မင်းပါးစပ်ပိတ်ထားဖို့ ကြပ်ကြပ်သတိပေးချင်တယ်” လို့ ပြောမယ့်လူစားမျိုးတွေ လိုပါတယ်။
တရားဟောဆရာကို သဘောမကျသူတွေက “ဒီဆရာကို ဘာကြောင့်မဲပေးသလဲ- အံ့ဩတယ်ကွာ” လို့ စပြောလာတတ်တယ်။
တရားဟောဆရာဖက်မှာ ရှိသူတွေက သေသေချာချာ စေ့စေ့ပြန်ကြည့်ပြီး “အေး အံ့ဩစရာတွေ ဖြစ်လာနေတာ ကြာပြီကွ။ ဒါပေမယ့် တို့မှာ ဘုရားကို ကြောက့်ရွံတဲ့ ချစ်တဲ့ သင်းအုပ်တယောက် ရှိနေလို့တော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးကွာ။ ဘုရားသခင်က အသင်းတော် ဦးဆောင်ဖို့ သူ့ကို တာဝန်ပေးထားတာပဲ။ အရေးကြီးတဲ့ ဩဝါဒတွေ cardinal doctrine တွေ မငြင်းရင် နောက်မိန်းမနဲ့ ဖေါက်လွဲဖေါက်ပြန်မရှိရင်၊ ငါတော့ အဲဒီဘုရားသခင်ရဲ့လူနောက်ကို လိုက်ရတာ ပျော်တယ်။ ဘုရားသခင်က တို့ကို အဲဒီလို လူတယောက်ပေးထားတဲ့အတွက် ဝမ်းမသာဘူးလား” လို့ ပြန်မေးရမှာပဲ။
ကိုယ့်သင်းအုပ်ဘက်မှာ မရပ်တာ ရှက်စရာပါ။ တောခွေးတွေက သင်းအုပ်ကို အသင်းတော် ဦးဆောင်ခွင့်မပေးရင် အကောင်းဆုံး ကာကွယ်မှုကတော့ တောခွေးစောင့်၊ ခွေးပါပဲ။
၇။ တောခွေးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြားမှာ ဘယ်လိုရပ်တည်မလဲ?
တောခွေးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကြားမှာ ရပ်တည်ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းက ဘာလဲ- အခု ဒီပရိတ်သတ်ထဲမှာ ဒဏ်ရာရထားတဲ့သူတွေ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးကြုံကြုံနေရသူတွေ ပါပါတယ်။
တောင်ထိပ်က သိုးအိုကြီးဟာ တောခွေးကို လွတ်အောင်မပြေးနိုင်ဘူးဆိုတာ ကျွန်တော် တွေ့လာရတယ်။ ပြန် မတိုက်ခိုက်နိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အနံ့ကိုတော့ ကောင်းကောင်းသိတယ်။ တောင်ထိပ်က သိုးအိုကြီးတွေဟာ တောခွေးနံ့ရရင် တောခွေးအခြေအနေကို စူးစမ်းကြည့်တယ်။ ကျောက်တောင်တလျောက် လျှောက်ကြည့်တယ်။ လျှိုတွေထဲ ဆင်းကြည့်တယ်။ ပြီးရင် အထက်ကို တက်ပြေးတော့တယ်။ နောက်တနေ့ဆို ပိုမြင့်တဲ့နေရာရောက်နေပြီ။ နောက်ထပ်တနေ့ဆို ပိုမြင့်မြင့် ရောက်သွားပြန်ပြီ။ အမြင့်တက်ရင်းတက်ရင်းနဲ့ နောက်ဆုံးကျောက်တောင်ထိပ်ကို ရောက်သွားတော့တယ်။
အဲဒီမှာရှိတဲ့ လေနုအေးကို တောခွေးတွေမခံနိုင်ဘူး။ သိပ်မြင့်လွန်းအားကြီးတယ်။ လေက အေးလွန်း၊ ပြင်းလွန်းတယ်။ ဒါပေမယ့် သိုးအိုကြီးတွေက သဘောကျတယ်။ သူတို့အတွက်တော့ သိပ်ကောင်းတဲ့နေရာပဲ။
အခုကနေ နောက် ၅ နှစ်လောက်ကြာရင် ဘုရားအလုပ် မလုပ်တော့မယ့် တရားဟောဆရာတွေ အထောက်အမဖြစ်ခဲ့တဲ့ သင်းအုပ်ဆရာကတော်တွေကို ကျွန်တော် ပြောနေတာပါ။ ဒီလိုဖြစ်ဖို့ မရည်ရွယ်ခဲ့ပေမယ့် ကျောမှာ ဓါးထောက်ခံနေရပြီ။ ကိုယ်ခင်ပွန်း သင်းအုပ်ဆရာရဲ့ အမှုတော်အတွက် စိုးရိမ်စိတ်တွေ ခံစားနေရပြီ။ မိတ်ဆွေဖြစ် ဟန်ဆောင်သူတွေကြောင့် အထဲမှာ ဖိစီးအားနဲ့ ကြေမွသွားရပြီ။
ဒီထက်ပိုဆိုးတာက ဆရာကတော်နဲ့ ဆရာ့ကို ချစ်တယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေကို မြင်ရင်း၊ စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်ယောက်ျားကျောမှာ ထိုးခံရတာပါဘဲ။ ဆရာကတော်တို့ရဲ့ သားသမီး၊ ကလေးတွေ အကြောင်းဆိုပြီး သူတို့ပြောတာတွေလည်း ကြားရတယ်။ ဒါလည်း ကိုယ့်ကို တခုခုတော့ ဒုက္ခပေးတာပါပဲ။ ဒီစကားတွေကြောင့် ကိုယ့်မှာ ဘာအကျိုးမှမရနိုင်ဘူး။
ကိုယ့်ခင်ပွန်းဆရာက သက်သေခံ စိတ်ဝိညာဉ်ရယူဖို့ အစီစဉ်အသစ်တွေ စတင်နေလိမ့်မယ်။ ကိုယ်ကလည်း ကြိုးစားပါဝင်ရမှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် တိုက်ပွဲကစပြီ။ ဘာလုပ်ရမှန်း သိဖို့ ခက်လာပြီ။
ကျွန်တော့အနေနဲ့ အဖြေ ဒါဇင်ဝက်လောက် ပေးချင်ပေမယ့် မပေးနိုင်ဘူး။ အဖြေတခုပဲ ပေးနိုင်တယ်။ အမြင့်ကို လှမ်းတက်ဖို့ပဲ လိုတယ်။
ကျွန်တော်ဟာ Sword စည်းဝေးကြီးကို နှစ်စဉ်အိမ်ရှင်အဖြစ် ကျင်းပနေတဲ့ ဒီအသင်းတော်ရဲ့ သင်းအုပ် Dr. Bobby Roberson ထံမှာ လက်ထောက်အဖြစ် ၇နှစ်ခွဲလောက် လုပ်ဆောင်ဖူးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၃၀လောက်တုန်းက လက်ထောက်အဖြစ် ကျွန်တော့ကို ခေါ်ခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော် ဒီကိုရောက်တော့ ဆရာ့မှာ စစ်ပွဲတခုထဲက ထွက်လာတဲ့ပုံမျိုးပါ။ ကျွန်တော် ရှိတုန်းမှာလည်း နောက်တပွဲကို သူရင်ဆိုင်ရသေးတယ်။
ကျွန်တော့ကို ခေါ်တဲ့အတွက် ဆရာ့ကို လူတစုက အပြင်းအထန် ဆန့်ကျင်ကြတယ်။ ကျွန်တော် ဒီမှာနေတုန်းက လုံးဝ အလုပ် လုပ်မရသလောက်ဘဲ။ ကြိုးစားလုပ်ချင်ပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ဟာ Bro. Bobby အတွက် အမြဲသစ္စာရှိခဲ့ပါတယ်။
တနေ့ သူ့အိမ်ကိုသွားခဲ့တာကို သတိရမိတယ်။ Bro. Bobby ကျွန်တော်တို့ -- ဒီလူ-- ဒီလူတွေကို ဘာကြောင့် မဲနဲ့ ပြုတ်သွားစေရတာလဲ” လို့ ပြောတော့ ….
ဆရာ့မှာ မျက်ရည်ဝဲရင်းက “အေး Larry ရေ တို့လုပ်ရင် ရနိုင်ပေမယ့် ဒီမှာရှိတဲ့ လူတချို့က နားမလည်နိုင်ဘူး။ လူကောင်းတချို့ကို စိတ်နာကျင်အောင် လုပ်နေကြပြီ။ အဲဒီလို မဖြစ်စေချင်ဘူးကွာ။ ဒီကိစ္စမှာ တချို့က ကိုယ်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာ ကိုယ်မသိကြဘူးကွ။ လူကောင်းတွေကို ဖျက်ဆီး မပစ်ချင်ဘူးကွာ” လို့ ပြန်ပြောပါတယ်။
ဒါဟာ စနေနေ့ည ညနက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ကျွန်တော့ဆရာ အရမ်းစိတ်ပင်ပန်းနေပြီ။ အရင်အဆောက်အဦး ဟောင်းကြီးထဲမှာရှိတဲ့ သူ့ရုံးခန်းထဲက ထွက်လျှောက်လာတယ်။ အခု ဒီခန်းမထဲမှာ မတ်တပ်ရပ်ရင်း သူ့ကြည့်ရတာ သူ့ပုခုံးမှာ တန် ၁သန်းလောက် အလေးချိန် ထမ်းထားရပုံ ပေါက်နေတယ်။
ကျွန်တော်က Bro. Bobby ဆရာဒီပွဲမှာ တော်တော်ပင်ပန်းသွားပြီနော်” လို့ ပြောတယ်။
မျက်ရည်တွေ ပိုးပိုးပေါက်ပေါက်ကျရင်း Larry ဘုရားသခင်က ငါ့လို တောသား တရားဟောဆရာတယောက်ကို ဒီမှာ ဘာကြောင့်ထားသလဲလို့ ခဏခဏ အံ့ဩမိတယ်ကွာ။ တခါတခါ တောင်ပေါ်တက်ပြီး လူ ၁၀၀လောက် အသင်းတော်ကလေးကို ဦးဆောင်ချင်လာတယ်။ ဘယ်လောက် စိတ်သက်သာမလဲကွာ။ ဒါပေမယ့် ရှိသမျှသိုးငယ်ကလေးတွေ အားလုံးနဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှေ့ရေးကို တွေးမိပြန်တယ်ကွာ” လို့ ပြောလာတယ်။
ဆရာဟာ ကမ္ဘာမှာ အံ့ဩစရာအကောင်းဆုံး သင်းအုပ်ပါပဲ။ Bro. Bobby အကြောင်း ကောင်းသတင်းတွေ အများကြီး ကြားဖူးကြမှာပါ။ တဝက်ကိုတောင် မှီဦးမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော် ၇ နှစ်ခွဲလောက် သူနဲ့ အတူ အလုပ်လုပ်ခဲ့၊ နေခဲ့ဖူးတယ်။ သူဟာ တကယ် တော်တဲ့သူပါ။
ကျွန်တော် နားလည်လိုက်တာကတော့ ဘုရားရဲ့မေတ္တာနဲ့ ကောင်းကြီးတွေကို ဝေမျှနေသူ တယောက် ဖြစ်မယ့်အစား စိတ်ညစ်သူ၊ စိတ်ဆိုးသူ ဖြစ်သွားနိုင်ပေမယ့် တခုမှ ဖြစ်မသွားခဲ့ဘူး။ တောခွေးရဲ့ တိုက်ခိုက်မှုကို ခံရချိန်မှာ သူက အမြင့်ကို တက်-တက်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ဝပ်နေပြီးတော့ ဘယ်သူမှ နားလည်မပေးနိုင်ပေမယ့် သခင်ယေရှု နားလည်ပေးနိုင်တာကြောင့် သခင်ဘုရားနဲ့ စကားပြောတော့တယ်။
သင်းအုပ်တွေနဲ့ သင်းအုပ်ကတော်တွေ တိုက်ပွဲမှာ ဒဏ်ရာရပြီး သေနတ်ပြောင်းဝရှေ့မှာ ရှိနေရသူတွေကို အားပေးချင်ပါတယ်။ တောခွေးအူသံကြားရင် အထက်အရပ်ကို တက်ပါ။ ကျမ်းစာဖတ် သခင်ဘုရားနဲ့ အချိန်ယူပါ။ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတွေ၊ ဆိုးညစ်မိုက်မဲမှုတွေ မဖြစ်စေပါနဲ့။ ဒီနည်းနဲ့ ဘဝပျက်မသွားစေနဲ့။ ဒါတွေကြောင့် အမှုတော်အပျက်မခံပါနဲ့။ ဒီကိစ္စတွေကြောင့် တရားဟောဆရာ လူဆိုးမဖြစ်ကောင်းသလို သင်းအုပ်ကတော် ဆိုးတယ်လို့လည်း မဖြစ်စေပါနဲ့။ အထက်အရပ်ကိုသာ တက်ပါ။ အဲဒီမှာ တောခွေးတွေအတွက် တံပိုးခရာ မှုတ်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
Posted by Papa at 1:46 AM
Blowing the Whistle on the Wolves By Larry Br...